हाम्राे पिपलबाेट » १०० दिनभन्दा कम समयमा नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने १०० जना, को हुन् उनीहरू? १०० दिनभन्दा कम समयमा नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने १०० जना, को हुन् उनीहरू? – हाम्राे पिपलबाेट
संसारमा कोरोना भाइरस सुरू भएको करिब चार महिनापछि नेपालमा यही भाइरस संक्रमणले पहिलो मृत्यु भएको थियो। जेठ ३ देखि साउन ३० गतेसम्म १०० दिनभन्दा कम समयमा नेपालमा कोरोना मृत्यु सय पुगेको छ। कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएकाहरू प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै एक सय जनाको विवरण हामीले यहाँ प्रकाशन गरेका छौं।
उनी पेसाले बस चालक थिए। उनले नाकाबाट मानिसलाई क्वारेन्टिन स्थलसम्म बसमा पुर्‍याउने काम गरेका थिए।
सुरूआतमै उच्च ज्वरो र स्वासप्रस्वासमा समस्या देखिएपछि उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार थालिएको थियो।
महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत् ४५ दिने शिशुको कोरोना भाइरसका कारण मृत्य भयो। शिशुलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको थियो।
पाटन अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका गोरखाका युवकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। भीमसेनथापा गाउँपालिका-२ तान्द्राङका २६ वर्षीय पुरुषलाई झुन्डिएको अवस्थामा परिवारले फेला पारेका थिए। लगत्तै परिवारले डोरी काटेर उनलाई गोरखाको एक निजी अस्पताल पुर्‍याएका थिए।
अस्पतालले अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै पाटन अस्पताल रिफर गरेको थियो।
९७) साउन ३०- विराटनगर, ४० वर्ष, पुरुष
९८) साउन ३०- विराटनगर, ३० वर्ष, पुरुष
९९) साउन ३०- पर्सा , ५० वर्ष, पुरुष
१००) साउन ३०- पर्सा, ६५ वर्ष, पुरुष
प्रसौनी गाउँपालिका-२ प्रसौनी टोल बस्ने ६५ वर्षीय पुरुषको कोरोनाका कारण नारायणी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। उनी दमका बिरामी थिए। उपचार क्रममा मृत्यु भएका उनको मृत्युपछि कोरोना पुष्टि भएको हो।- सेतोपार्टीबाट
३० श्रावण २०७७ मा प्रकाशित